नागा नाचे मैदान | नेपाल डायरी डट कम
नागा नाचे मैदान	20
नेपाल डायरी डट कम # 4.00
राजा ज्ञानेन्द्रको परिसदको उपादक्ष स्याल मन्त्री तुलसि गिरीले आज अख्तियार मा बयान दिएर फर्के पछि अख्तियारको गेट्मा पत्रकार हरुसङ कुर्लिदै भन्यो- अहिलेको सरकार र सरकारका प्रधान मन्त्री सबभन्दा ठुला भष्ट्राचारी हुन ।डा टी गिरि उर्फ बिरेन्द सिङ् ले आफुले कुनै भष्ट्राचार नगरेको र आफुले मासिक लिएको रु ७५००० नियम अनुसार नै लीएको दाबि गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाउदैमा केहि नहुने र आफुले मुद्दा लड्ने पनि बतायो । नालायक सरकार ले रायंमाझि आयोगको प्रतिबेदन लाइ धोति लगाए पछि सायद ब्वासोको मनमा परेको हुन सक्छ , अब कसैले मलाइ केहि गर्न सक्दैन । अब चै आफै लाइ भष्टाचारीको आरोप लगाए पछि यो सरकारको चेत खुल्छ कि ? नत्र भोलि कमल थापा र रबिन्द्र नाथ हरुले पनि भन्न सक्छन , यो सरकार मण्डले को हो र अबैधानिक छ । बेलै मा सरकार को आखा खुलोस।
देस भरखर जन आन्दोलनको बार्षिकि मनाउने तरखर मा रहेको बेला राजाको स्याल मन्त्री ले यसरी ध्वास दिदा पनि सरकार मुकदर्सक हुने ? नागरीक समाजले आन्दोलन जारी छ भनेको ठिकै हो । अब को आन्दोलन राजा र उसका स्याल हरुलाइ ठेगान लगाउने गरी हुनु पर्छ , ता कि स्याल हरु बेला न कुबेला हुइइया गर्दै सडक सडक ननाचुन ।
तलको प्रसंग भने हिमाल खबरपत्रिका १-१५ साउन २०६३ बाट लिइएको हो ।
१३ असारमा आयोगका अध्यक्ष कृष्णजङ्ग रायमाझी, सदस्यहरू हरिहर विरही, रामप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष बयान गर्दा तत्कालीन शाही सरकारका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरि मलिन र विनययुक्त शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। आयोगलाई दिएको बयानमा उनले, “जनआन्दोलन दमन गर्न मन्त्रिपरिषद नै सक्रिय भएकोले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो पनि हुने” बताए। तर बयान सकेर बाहिर निस्कनासाथ उनले कुरा फेरे। आयोगको ढोका कुरेर बसेका पत्रकारलाई उनले भने, “दमन कसले गर्‍यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुस्। २१ जनाको हत्याको जिम्मेवारी जसले लिनुपर्ने हो उसले लिनुपर्छ।”आयोग सूत्रका भनाइमा, बयान दिँदा भने डा. गिरि साँच्चिकै डराएका थिए र उनलाई साँझ घर फर्किन पाइने/नपाइनेमा द्विविधा थियो। के पर्छ के भनेर उनले घरबाट जुश बोकेर आएका थिए। तर, केही घण्टामै बयान सकिएपछि डा. गिरि श्रीमती सारा योञ्जनले पठाइदिएको जुश लिएरै घर फर्किए।